Daawo Maqal iyo Muuqaal Halgan web Tv Station Broadcasting Live (Daawo)
Shabakadda Wararka Halgan.net iyo Radio Halgan Live ayaa waxay si toosa idinku soo tabin doonaa hadii uu alle idmo Duruusta iyo Nadwooyinka lagu qabto dalka gudahiisa iyo dibadiisa .
Shabakada Wararka Halgan.net oo aad uga barateen in marwalba ay idiin soo tabiso mutamaraadka iyo nadwooyinka Culumada Soomaaliyeed ayaa si Maqal iyo muuqaal ah .
Waxaa kale oo aad si sahlan ugu shuban karaan telkooda gacanta Radio Halgan Live Google Play hadii uu yahay telfanka aad heysato nooca Android hadii aad heysato Apple waxaad ka soo gishataa App Store .waxaad ku qoreysaa (Radio Halgan Live) waa free wax lacag ah maaha . Halkan ka Dajiso Radio Halgan Google Play Halkan ka Dajiso Radio Halgan Live App Store Waxaa kale oo aad duruusta iyo towjiihaadka culumada aad si dhib yar aad uga dhageysan kartaa Radio TuneIn oo aad soo gishan karto telfankaaga gacanta.Radio TuneIn ka dib meesha ay ku taal Search ku qor Radio Halgan Live . Alle waxaan ka baryeynaa in acmaasheen uu ka dhigo mid kaligiisa khaalis u ah Aaaamiin . Daawo Live بث مباشر #مسابقه_الملك_عبدالعزيز_الدوليه_للقران الكريم وتلاوته وتفسيره – الدورة 40
ama Halkaan ka Dhagayso Halkan Ka Dhageyso Radio Halgan Live. Dhamaan waxaan u mahad celineynaa walaalaha nagu kordhiyey talooyinka iyo nasiixooyinka qiima galka ah oo ay na soo gaarsiiyeen qaar ka mid ah culumada Soomaaliyeed alaha dhowree dhamaantoood. Wixii talo iyo fadlan noogu soo hagaajiya Webmaster@halgan.net alle waxaan ka baryeynaa in uu camalkeena ka dhigo mid isaga gaar u ah Aaaamiin Hoos ka Daawo Halgan web Tv Station Broadcasting Live
Daawo Live Daawo Live بث مباشر #مسابقه_الملك_عبدالعزيز_الدوليه_للقران الكريم وتلاوته وتفسيره – الدورة 40
Maamulka Halgan.net /